सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो | नेपाल आज
बुधबार, २९ बैशाख २०७३ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (PH)
प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी इतिहासका अध्येता हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साधार्थी केसी सटिक टिप्पणीका लागि परिचित छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका बारे केसीसंग सहकर्मी माधब गुरागांईले गरेकोे कुराकानी ।
यो पटक पनि सांसद बिकास कार्यक्रमको नाममा नचाहिएको रकम बिनियोजन गरिने कुरा छ । यसले वडासम्म भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ तर जनतालाई लाभान्वित गर्दैन । कनिका छरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई केही फाइदा गर्दैन । नीति तथा कार्यक्रम सांसदहरुकै हितमा छ । यो सरकारले गर्नै नसक्ने कुरा गरीरहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
केसीः मूलभुत रुपमा यो परम्परागत छ । यद्यपी कर्मकाण्डी भने छैन् । अनेक अप्ठेरा झेल्दै सरकारले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु सकारात्मक कुरा हो । उत्तर र दक्षिणबाट राष्ट्रले भोगेको गतिरोधलाई प्रतिरोध गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । तात्विक रुपमा नयां छैन् । राजनीतिक स्वार्थ, दलिय स्वार्थ र चुनावी स्वार्थबाट अछुतो छैन् ।
यसका कमजोरी के के छन् ?
केसीः हाम्रा साधनस्रोतहरु के के हुन् ? कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर चर्चा गरिएको छैन् । तर यति धेरै उच्च महोत्वकांक्षाहरु राखिएका छन् तिनलाई पुरा गर्न हामीसंग राष्ट्रिय चरित्र नै छैन् । प्रचारमात्र गर्नका लागि बनाएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यसो भए सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नचाहीदो प्रचार मात्र गरेको हो ? कार्यान्वयनको पाटो के हुनसक्छ ?
केसीः पुर्वाधारहरु, साधान र स्रोतहरु र हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रहरु बिचार गर्दा कार्यक्रमहरु प्रचार गर्नकै लागि बनाएको हो भन्ने स्पस्ट छ । स्रोतसाधनको ब्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो छ । तसर्थ कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्छु म । र यो कार्यन्वयन गर्न भनेर बनाएकै होईन केवल हल्ला गर्न मात्रै पेश गरीएको छ । यो पटक पनि सांसद बिकास कार्यक्रमको नाममा नचाहिएको रकम बिनियोजन गरिने कुरा छ । यसले वडासम्म भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ तर जनतालाई लाभान्वित गर्दैन । कनिका छरेजस्तो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई केही फाइदा गर्दैन । नीति तथा कार्यक्रम सांसदहरुकै हितमा छ । यो सरकारले गर्नै नसक्ने कुरा गरीरहेको छ । यो संभव नै छैन ।